Andohatapenaka, Ambanidia, Tsaramasay: nirongatra be indray ny Covid-19 eto Antananarivo sy ny manodidina | NewsMada
Andohatapenaka, Ambanidia, Tsaramasay: nirongatra be indray ny Covid-19 eto Antananarivo sy ny manodidina
Par Taratra sur 18/06/2020
Niaiky ny mpitondra tenin’ny CCO fa nitombo be ny isan’ireo nifindran’ny Coronavirus. Tsy eto an-dRenivohitra ihany anefa fa ahitana izany fihanaky ny valanaretina izany koa ny manodidina an’Antananarivo. Nihena hatrany kosa anefa ny tranga vaovao ho an’i Toamasina.
Niakatra be tampoka. Miisa 61 ireo nifindran’ny Coronavirus, araka ny tatitra navoakan’ny CCO, omaly. « Miparitaka amin’ny toerana samihafa izany valanaretina izany amin’izao fotoana izao », hoy ny mpitondra teny, ny Pr. Vololontiana Hanta, omaly. Ahitana izany etsy Ambanidia, etsy Andohatapenaka, eo Tsaramasay ary eny Morarano ho an’ny eto an-dRenivohitra. Eny Ampitatafika, eny Ambodiafontsy, eny Bemasoandro/Itaosy ary eny Alakamisy Fenoarivo ho an’ireo tanàna manodidina. Tsy vitan’izany fa niverenan’ny valanaretina indray koa ny tanàna sasany. Anisan’izany ny any Tsiroanomandidy sy i Moramanga, ahitana tranga iray avy sy ny ao Antsirabe, misy tranga telo.
Niampita ranomasina ny Coronavirus
Etsy andaniny, niampita ranomasina koa ny Covid-19 ka efa ahitana izany any Nosy Sainte-Marie. Misy olona roa nifindran’ny Coronavirus any an-toerana. Tanàna vaovao vao nifindrany. Mpiasan’ny fahasalamana iray sy ny zanany ireo voa ireo ary efa nalefa any Toamasina, rehefa nihombo ny aretina.
Raha miainga amin’ny antontanisa navoakan’ny CCO io, miisa 32 ireo nifindran’ny valanaretina eto Antananarivo amin’ireo tranga vaovao miisa 61. Resy eo amin’ny antontanisa indray ny avy any Toamasina. Miisa 22 ihany ny any an-toerana.
Tranga 53 tao anatin’ny 48 ora ny eto Antananarivo
Tsiahivina fa telo ihany ny isan’ireo nifindran’ny valanaretina tany Atsinanana, afakomaly, raha miisa 21 izany ho an’ny eto Antananarivo. Izany hoe, miisa 53 izany ny isan’ireo nifindran’ny Covid-19 eto Antananarivo, tao anatin’ny roa andro.
Na izany aza, tafakatra 33 koa ireo sitrana ka avy eto an-dRenivohitra ny 26 raha any Toamasina kosa ny fito. Miisa 450 izany izao ireo efa nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana. Miisa valo kosa anefa ireo marary mafy amin’izao fotoana izao ary
917 ireo mbola manaraka fitsaboana sy arahi-maso ny fahasalamany. Efa mananika ny 1 378 ireo tratran’ny Coronavirus hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty ary 16 402 ireo fitiliana vita. Mijanona ho 12 ireo namoy ny ainy noho ity valanaretina ity.
Tsiahivina fa mbola nanamafy ny tokony hanajana ny fepetra sy ny toromarika hatrany ny eo anivon’ny CCO, indrindra amin’izao efa fahafahana miasa hatramin’ny 5 ora hariva izao.